Iimpawu zoLuntu, i-SEO, kunye neempembelelo zabo komnye nomnye | Martech Zone
UMatt Cutts wabelane ngevidiyo apho axoxa khona ngomceli mngeni iinjineli ezinokuba nawo ukuba bezenze ukuxhomekeka phakathi kweendlela zokubeka kuGoogle kunye neempawu zentlalo. Ngamafutshane, kunokuba yingozi kakhulu ukwakha ezi zixhomekeke kwimeko apho elinye iqonga leendaba loluntu livimba ukukhangela okanye lawa kuthandwa.
Andithandabuzi ukuba kunjalo, kodwa le iindlebe qhubeka njengoko iingcali zeinjini yokukhangela zihlala zibona unxibelelwano phakathi kwezihloko zentlalo ezihamba phambili kunye nenqanaba lokukhangela kwiinjini yokukhangela. Njengoko uMat ephindayo, ayisiyiyo imbangela, nangona kunjalo. Siye sabelana ngeengcinga zethu kwi Impembelelo yemidiya yoluntu kwi-SEO sele, kodwa makhe sixoxe ngemiqondiso yezentlalo kunye nendlela ezihambelana ngayo.
Abalandeli kunye nokuBala kwabaLandeli -Ukuba uligunya elaziwayo, kwishishini lakho, amathuba alungile ukuba ubhaliwe malunga ne-Intanethi. Mhlawumbi ubuthetha kwimisitho, wenza udliwanondlebe, ubhala imigca ebhaliweyo, okanye abantu babhekisa kwimisebenzi yakho. Naluphi na olukhankanyiweyo, ewe, luya kuqhuba zombini amakhonkco kuwe. Ewe kunjalo, ukwamkelwa okunjalo kuya kuqhuba ngokuqinileyo okulandelayo kwi-Intanethi ukuba usebenzisa imithombo yeendaba yoluntu. Ukulandela intlalontle kunokuba ikakhulu fake, Ukwenza ezo zibalo zingenakwenzeka ngokungeniswa kwinqanaba.
Izabelo zeNtlalo Imithombo yeendaba kwezentlalo ibonelela ngeyona ndlela isebenzayo nesebenzayo yokwabelana ngolwazi kwi-intanethi kwiinethiwekhi ezifanelekileyo. Yabelana ngophando olungaqhelekanga olusisiseko okanye isiqwenga somxholo kwaye awuyi kumangaliswa xa usasazeka njengomlilo wasendle kwaye ufikelela kubantu abaninzi. Izabelo zosasazo lweendaba ezentlalo zihlala zifunyanwa njani ngezixhobo ezitsha okanye izifundo, zikhokelela ekubeni ndibhale ngazo kwaye ndivelise i-backlinks. Ngelixa ivolumu ephezulu yokwabelana ngokwasentlalweni ingabangeli inqanaba, iya kulungelelanisa nenqanaba elikhulu.
Kuba akukho lungelelwaniso ngqo aluthethi ukuba akukho mpembelelo, nangona kunjalo. Ukuba ndifumana isibonelelo esikhulu okanye iqonga ekukhangelo, ndiza kwabelana ngalo kwiiakhawunti zam zemidiya yoluntu. Ukuba ndifumana isixhobo kumajelo eendaba ezentlalo kwaye ndabelana ngaso nabaphulaphuli bam ngokubanzi, kuya kukhokelela kumanqaku ongezelelweyo kunye ne-backlinks eqhuba isikhundla. Ke ngelixa kungekho lungelelwaniso ngqo, kukho ukungangqalanga ngqo kwisitishi ngasinye esinokuba nakho kwelinye.
Ukusebenzisa zombini imijelo kuya kuphucula iziphumo zenye. Sukulihoya eli thuba! Nazi ezinye iingcebiso ezilungileyo ezivela Uhluma lweNtlalo Abaphathi beendaba zentlalo ukuba bahambelane neendlela zokusebenzisa injini yokukhangela.
Ukwabelana ngezeNtlalontle kuyanda
Cacisa Kutshanje kukhutshwe ingxelo yokuba I-Facebook ngoku yoyisile iGoogle njengomthumeli ophambili kubapapashi. Oku kwehla kubalulekile kubavakalisi ukuba bakugcine engqondweni. Ukuba ugalela yonke imizamo yakho kulwakhiwo lweinjini yokukhangela kunye namathuba e-backlink, kwaye ungaphuhlisi iqhinga elikhulu losasazo loluntu, amathuba okufikelela kubaphulaphuli abatsha ayancipha.
tags: enjini yokukhangela nounSEOimiqondiso yemidiya yoluntuisicwangciso seendaba zoluntuisicwangciso sokwabelana noluntuiimpawu zentlaloIsicwangciso sentlalo